Nus ကျောင်း၀င်ခွင့် သင်တန်း — MYSTERY ZILLION
Nus ကျောင်း၀င်ခွင့် သင်တန်း
January 2010 edited January 2010 in Project
ဘယ်မှာ ရေးရမှန်းမသိလို့ ဒီမှာပဲ post လိုက်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် sg က nus မှာ computer နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်တန်းတက်ချင်လို့ ၀င်ခွင့် စာမေးပွဲ ဖြေရမယ်ပြောတယ် ။ အဲဒါ ဘယ်မှာ exam preparation course တက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါလား ။ ကျွန်တော် စုံစမ်းကြည့်တာ မသိရသေးလို့ ။
ပြီးတော့ ကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင် Form လျှောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှောင်ရန်လေးတွေကိုလည်း ပြောပေးပါနော် ။
ဘယ်ကျောင်းခွဲ Faculty ကိုု ၀င်ချင်တာလဲခင်ဗျာ။ (Institute of System Science (ISS) ? School of Computing (SoC) ? Faculty of Engineering (FoE)? Faculty of Arts and Social Science (FASS) ?)
နောက်တခါ ဘယ်အဆင့်ကို ၀င်ချင်တာလဲ ခင်ဗျာ။ (ဘွဲ့သင်တန်း၊ မဟာဘွဲ့၊ ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ၊ ပီအိတ်ချ်ဒီ)
၀င်ခွင့်အားလုံးနီးပါးကတော့ SAT I ပုံစံ ဉာဏ်စမ်းတွေပဲ မေးတာဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းရဲ့ တည်ဆောက်ပုံက ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးပေါ် မူတည်ပြီး အမှတ်ထွက်အောင်၊ ပြင်ဆင်မှုပေါ် မမူတည်အောင် တတ်နိုင်သလောက် မေးခွန်းထုတ်ထားလေ့ ရှိတာမို့
မေးခွန်းပေါက်တဲ့ ကိစ္စကလွဲရင် ဘယ်လောက် သင်တန်းတက်တက် အမှတ်ကတော့ ဒီလောက် ဒီလောက်ပါပဲ။
Form တင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NUS မှ မဟုတ် ဘယ်ကျောင်းကို လျှောက်လျှောက် ရိုးသားဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် အမေရိကားက အတော်အဆင့်ရှိတဲ့ ကျောင်းကြီးကို လျှောက်တယ်။ ကျောင်းလခက တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၃ သောင်းကျော် ကျတယ်။ ငါ့အဖေလစာက ကျောင်းဆရာ လစာမို့လို့ မှောင်ခိုစျေးနဲ့ တွက်ရင် တစ်နှစ်လုံးနေမှ ဒေါ်လာ ၂၀၀ ပဲ ရတယ်လို့ ရိုးရိုးသားသား ရေးလိုက်တာ (SAT and TOEFL အမှတ်ကောင်းတာလဲ ပါတာပေါ့လေ။) ဗီဇာ၀င်ဖို့ ပိုက်ဆံကအစ ကျောင်းက စပွန်ဆာ ရှာပေးပါတယ်။ တပြားမှ မကုန်ပဲ ဘွဲ့ရသွားရှာပါပြီ။
ရိုးသားပါ။ ကိုယ့်မှာ ရှိတာတွေကိုတော့ အကုန် ထုတ်ကြွားပါ။ မရှိတာ မတတ်တာကို မရှိဘူး မတတ်ဘူး လို့ သေချာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးပါ။ ပြီးတော့ အဲဒါတွေကို ရှိလာ တတ်လာအောင် ဘယ်လို ကြိုးစား ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ကြောင်း သေချာ ရေးပါ။ ဒါဆိုရင် ကျောင်း၀င်ဖို့ အရမ်းနီးစပ်ပါတယ်။
ကိုလောရှည်ရေ ကျွန်တော်တို ့့ UCSY ကနေ ဘွဲ ့ရသွားရင်လည်း NUS(Sg) မှာ Master အနေနဲ ့ဆက်ပြီးတော့တက်လို ့ရတယ်လို ့ကြားဖူးပါတယ်
SOC ဆိုရင်တော့ ဒါကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
ISS Master ဆိုရင်တော့
nus မှာ မကြာမှီ ဖွင့်တော့မယ့် iss အတန်းကို တက်ချင်တာပါ ။ ဒီမှာ သင်တန်းတက်လို့ မထူးဘူးဆိုရင်တော့ မတတ်တာပဲကောင်းမယ် ။
Aptitude Test ဖြေဖို့လိုတယ်ဗျ ။ အောင်တယ်ဆိုရင် interview လုပ်မယ်တဲ့ ။ Aptitude Test ဆိုတာ GMAT လိုပါပဲ ။
Form လျှောက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရိုးသားဖို့လိုတယ်လို့ ပြောတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ဘွဲ့ ရမှတ်တွေကို ဖော်ပြပေးရမှာဆိုတော့လေ အမှန်အတိုင်းပဲ ရေးရမှာပေါ့ ။
IELTS , Toffel အမှတ်တွေတော့ မရှိဘူး ။ အဲဒိ မရှိတဲ့ အကြောင်းကို essay မှာ ထည့်ရေးလိုက်မယ် နော် ။
အမှတ်တွေ မထည့်ရဘူး။ ဆိုလိုတာက ၁၀၀ မှာ ၈၀၊ ၅၇ စတာတွေကို သူတို့ မလိုချင်ဘူး။ a, b, c,dဂရိတ်ပဲ လိုချင်တယ်။
များသောအားဖြင့် အမှတ်ထည့်လျှောက်တဲ့သူတွေ အပယ်ခံရတာ များတယ်။